ကိုရန်နိုင် (VOA) နှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာတေဇာဆန်း
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နောက်ပြန်ဆုတ်ကုန်တယ်၊ ပြည်သူတွေဘက်က ရွေးချယ်စရာမရှိပဲ ဆက်ပြီးတော်လှန်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မန္တလေးက နွေဦးတော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာတေဇာဆန်းက ပြောပါတယ်။ ကိုရန်နိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ ကိုတေဇာဆန်း။ အခုဆိုရင် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တာ (၈) လ ကျော်လာခဲ့ပြီ။ ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်က ဒီလိုအာဏာသိမ်းတဲ့အပေါ် လူထုကလည်း ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုတွေ၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေက ဆက်ပြီးတော့ ရှိနေတုန်းပဲ။ ပုံစံတွေပြောင်းလာတယ်ဆိုပေမယ့် လူထုရဲ့  ဆန့်ကျင်မှုတွေက ဆက်ပြီးတော့ ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ သိချင်တာက အခုလက်ရှိ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုတေဇာဆန်းရဲ့  အမြင်ကို သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ဆိုရင် အချိန်ကာလအားဖြင့် ရှစ်လတောင် ကြာခဲ့ပြီ။ ကျနော်တို့လူထုက တစ်နေ့တစ်ရက် တစ်နာရီမှ ငြိမ်သက်သွားတာမျိုး၊ သွေးအေးသွားတာမျိုး စစ်အာဏာရှင်ကိုရော၊ အာဏာသိမ်းမှုကိုရော လုံးဝလက်မခံဘဲ၊ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ အသားကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ -- တော်လှန်ရေးကာလ ဖြစ်လာကာစ အကောင်းဆုံးသက်သေတည်နေပြီလို့ ပြောလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲနည်းနာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ကျနော်တို့ မျှော်ရည်တဲ့ပန်းတိုင်ကို မရောက်မချင်း၊ ဆက်ပြီးတော့ ချီတက်သွားကြမယ်ဆိုတာ အင်မတန်သေချာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြနေတာတွေဟာ အရင်လိုမျိုးတော့ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ မဟုတ်တော့ဘဲ၊ နည်းသွားတယ်ဆိုပေမယ့် ရှိတော့ရှိနေတုန်းပဲ။ မန္တလေးအပါအဝင် တချို့ မြို့ တွေမှာဆိုရင် နေ့တိုင်းရှိနေတုန်းပဲ။ တဘက်မှာလဲ စစ်ကောင်စီက သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကို ပိုပြီးတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိမ်နင်းလာတယ်။ စစ်ကောင်စီဘက်ကလဲ သူတို့ကို တတိုင်းပြည်လုံးက ဆန့်ကျင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ တချို့ မြို့ တွေမှာပဲ ဆန့်ကျင်နေတာဆိုပြီးတော့ ပြောတာတွေ ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ အခုနောက်ပိုင်း တော်လှန်ရေးအသွင် ပြောင်းလာတော့ ဆန္ဒပြသပိတ်တွေက အရင်လိုတော့ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ ဒီဆန္ဒပြသပိတ်တွေ ဆက်ရှိနေဖို့ ဘယ်လောက်အထိ အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုမလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော် အမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ဒီနေ့အချိန်မှာ တော်လှန်ရေးရဲ့  မဏ္ဍိုင်တွေ။ ကျနော်တို့မှာ အဓိကမဏ္ဍိုင်ကြီး (၅) ခုကို ကောက်ချက်ထားလို့ ရပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ အခုအချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုက လမ်းမထက်က သပိတ်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအနေနဲ့ CDM ရုံးမတက်ဘဲ ရုန်းထွက်ခဲ့တဲ့ CDM သူရဲကောင်းတွေရဲ့  CDM တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ စတုတ္ထအနေနဲ့ကတော့ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရက တရားဝင်အစိုးရ ဖြစ်တယ်။ စစ်ကောင်စီက အကြမ်းဖက်အုပ်စု ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ တရားဝင်မှုဆိုင်ရာ သံခင်းတမန်ခင်း တိုက်ပွဲ။ ပဉ္စမ - ငါးခုမြောက်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်မပြဘူး၊ လက်မခံဘူး။ သူနဲ့ အဆက်အစပ် မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ “ဘူးသပိတ်တိုက်ပွဲ” ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့က ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့  ဒေါက်တိုင်ကြီး (၅) ခု အားကောင်းနေဖို့လိုတယ်။ ဟန်ချက်ညီနေဖို့လိုတယ်၊ သန်မာနေဖို့လိုတယ်။ ဒီမဏ္ဍိုင် (၅) ခုထဲက တစ်ခုခု အားနည်းသွားမယ်၊ ယိုင်းနည့်သွားမယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ဟာတွေက ဒီအပေါ်မှာ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သွားမယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အမြဲတမ်းပြောနေတာ တော်လှန်ရေးရဲ့  ဒေါက်တိုင်တွေအားလုံး တော်လှန်ရေးနည်းနာတွေအားလုံး အားကောင်းသန်မာနေဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ ပထမဦးဆုံး ပြောလိုပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့တော့ မှန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ လမ်းမထက်က သပိတ်တိုက်ပွဲတွေဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ မတ်၊ ဧပြီလတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် လူထုပါဝင်မှုက လျော့ကျသွားတယ်။ ဒါကလဲ အဆန်းတကျယ်လဲ မဟုတ်ဘူး။ လူထုကို အပြစ်တင်စရာလဲ အကြောင်းမရှိဘူး။ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် - လက်နက်ဆိုလို့ အပ်တိုတစ်ချောင်းတောင် မရှိခဲ့ဘူး။ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကိုင်၊ လော်စပီကာလေးတွေကိုင် လမ်းမထက်မှာ မိမိတို့အရေး ဆန္ဒတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြတယ်။ ရဟန်းရှင်လူထုကို သေနတ်အစစ်၊ ကျည်းအစစ်နဲ့ ရက်ရက်စစ်စက် ပစ်သတ်ခဲ့တာ။ အချိန်တိုင်း၊ နေတိုင်းလိုလို ပစ်ခံခဲ့ရတယ်။ ဖြိုခွဲခံခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာတောင် ရှစ်လကြာခဲ့ပေမယ့် သပိတ်တိုက်ပွဲတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ အင်မတန်ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းနေပါပြီ။ အင်မတန်အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကောင်းပြီ။ ကျနော်ထင်တယ် ဒီလောက်ကြာ သပိတ်တိုက်ပွဲက ကမ္ဘာမှာတောင် အရှည်ကြာဆုံး သပိတ်တိုက်ပွဲ။ ဒီနေ့အချိန်အထိ ကျနော်တို့က သပိတ်တွေ ရှိနေသေးတယ်။ ပျောက်ကျားသပိတ်တွေ ရှိနေသေးတယ် တနိုင်ငံလုံးမှာ မြို့ ကြီးတွေနဲ့ ကျေးလက်တွေမှာ။ အဲဒီတော့ ပြောချင်တာက လူထုပါဝင်မှု သပိတ်တွေ အားနည်းသွားတာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၊ စစ်တပ်ရဲ့  ရက်စက်ယုတ်မာမှု ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းလောက်က ကျနော် စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကို အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာတော့ သူက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြလို့ ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်တာတွေ၊ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ဖျက်ဆီးတာတွေ မလုပ်ဘူးဆိုရင် စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း ဒီလိုမျိုး အကြမ်းဖက်အင်အားသုံး နှိမ်နင်းစရာ မလိုဘူးလို့ ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီအပေါ် ကိုတေဇာဆန်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုပြောချင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ အင်မတန် မျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့ ဟာသစကားလို့ပဲ ပြောလိုပါတယ်။ တချို့  မန္တလေးမှာဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ သံဃာသပိတ် အဖြိုခွင်းခံရပါတယ်။ သံဃာတော် တကယ့်ဘုရားသားတော် လယ်တီဆရာတော်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ သံဃာတွေကို ရက်ရက်စက်စက် တန်းပြီးတော့ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ စစ်ယူနီဖောင်း၊ ရဲယူနီဖောင်းမပါဘူး အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ သေနတ်စစ်တွေနဲ့ တန်းပစ်တယ်။ ကားနဲ့ဝင်တိုက်တယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဝင်တိုက်တယ်။ ဒါက နမူနာတစ်ခုပဲကို ပြောတာ။ အဲဒါမျိုးတွေက မကြာခဏ ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ အခုနပြောသလို လက်နက်နဲ့ တူတာဆိုလို့ အပ်တိုတစ်ချောင်းတောင် မပါဘူး။ ဆိုင်းဘုတ်တွေ၊ ကြွေးကြော်သံလေးတွေနဲ့ ချီတက်နေတဲ့ သပိတ်တိုက်ပွဲတွေ။ အကြမ်းဖက်ဖို့ နေနေသာသာ ကျနော်တို့က မိမိတို့ရဲ့  လိုလားချက်တွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆိုနေတဲ့ သပိတ်ပြည်သူတွေကို စစ်ကောင်စီက ရက်ရက်စက်စက် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အချိန်နဲ့အမျှ ဖြိုခွဲနေတယ်။ သတ်ဖြတ်နေတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ် အခုနပြောခဲ့တဲ့ စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ မယုံဘူးဆိုရင် သူကိုယ်တိုင် အသွင်ယူပြီးတော့ ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာဖြစ်တယ်၊ မန္တလေးမှာဖြစ်တဲ့ သပိတ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုခုမှာ လိုက်ကြည့်ပါလို့။ ဘယ်လိုကြုံရမလဲဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ သူ့မိသားစုဝင်တွေကို ဖြစ်စေ လမ်းမထက်ကိုတက်ပြီးတော့ ကြည့်ရှုကြည့်ပါလို့ပဲ ပြောလိုပါတယ်။ စစ်ကောင်စီက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဘယ်ကျင့်ဝတ်ကိုမှ မလိုက်နာဘဲနဲ့ လမ်းမထက်က သပိတ်တွေကို ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်နေတယ်၊ ဖြိုခွင်းနေတယ်။ ပစ်ခတ်နေတယ်ဆိုတာကို သက်သေသာကာရတွေ၊ အထောက်အထားတွေ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ အခိုင်အမာရှိပါတယ်လို့လည်း ပြောလိုပါတယ်။ သို့သော် ကျနော်သေချာတာကတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေအထဲကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ အဖမ်းအဆီးခံရပါစေ၊ စစ်ကောင်စီ ဘယ်လောက်ပဲ နှိပ်စက်ပါစေ။ ကျနော်တို့ရဲ့  တိုက်ပွဲနည်းနားတွေအားလုံးကို လက်တွန့်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ဆုတ်မသွားဘူး။ သွေးမအေးသွားဘူး။ သပိတ်တိုက်ပွဲက အရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်ရှိနေမှာ သေချာတယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။
အသံတိတ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ အလံလိပ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး ။ ။ ဒီလိုမျိုး စစ်ကောင်စီဘက်က အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းတာတွေနဲ့ တဆက်တည်း နောက်တစ်ခု မေးချင်တာက အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် စစ်ကောင်စီဘက်က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက လူတွေကို ဖမ်းတယ်။ ပြီးရင် နောက်နေ့ကျရင် အလောင်းလာထုတ်ပါဆိုပြီး ပြောတာတွေ ရှိတယ်။ ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် မန္တလေးက မြို့ မတီးဝိုင်းက ကိုဖက်တီးဆိုလဲ ဖမ်းသွားပြီးတော့ သူတို့လက်ထက်မှာပဲ သေသွားတယ်။ နောက် ဒါမျိုးဖြစ်တာတွေက တော်တော်များများလည်း ရှိတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ကိုတေဇာဆန်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးလိုလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ မန္တလေးမှာဆိုရင်တောင် ဒီနေ့ဖမ်းသွားတယ်။ နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း အလောင်းလာယူပါဆိုပြီး ထုတ်ပေမယ့် အလောင်းမမြင်ရဘူး။ ဥပမာ ဦးဖက်တီးဆိုရင် ကျနော်တို့ အလောင်းတောင် မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေက မန္တလေးအပါအဝင် တနိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်နေတယ်။ မနက်ခင်းဖမ်းသွားတယ်။ ညနေကျတော့ သေသွားပြီ။ ဒီနေ့ည ဖမ်းသွားရင် နောက်နေ့မနက်မှာ ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတွေက အလောင်းတောင် တွေ့ခွင့်မရလိုက်ဘူး။ ဒါတွေသည် ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ မဟုတ်တဲ့၊ ဘယ်တော့မှ ပြီပျောက်သွားမှာ မဟုတ်တဲ့ သင်ပုန်းချေလို့ မရတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ဖြစ်တယ်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ ဖြစ်တယ်။ လူသားမျိုးနွယ် လူ့အခွင့်အရေးကို အင်မတန်မှ ချိုးဖောက်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့တယ်။ စစ်ကောင်စီသည် ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံ ကျူးလွန်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်အုပ်စု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အင်မတန်ထင်ရှားစွာ သက်သေပြနေတယ်လို့ပဲ ပြောလိုပါတယ်။
မေး ။ ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တနိုင်ငံလုံးလိုလိုမှာ လူထုက ခုခံစစ်တွေကို လုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့ နေရာတော်တော်များများမှာ လူထုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တာတွေ ရှိလာတယ်။ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး လူထုနဲ့ ထိပ်တိုက် နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ လူထုရဲ့  ခုခံစစ်တွေနဲ့ တွေ့လာနေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ ကိုတေဇာဆန်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်မိသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ အင်မတန်လေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာကြီး ဗန်မော်တင်အောင် ရေးခဲ့သလိုပေါ့ - ကျနော်တို့က ဓါးမိုးပြီးတော့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အာဏာရှင်ကို ဓါးကိုင်ပြီးတော့ အန်တုပြီးတော့ ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့က ကျနော်တို့ရဲ့  သမိုင်းပေးတာဝန်ပဲ။ ကျနော်တို့ ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ မတ်၊ ဧပြီလတွေမှာ တောက်လျှောက်ငြိမ်းချမ်းစွာပဲ လူဦးရေးသိန်းနဲ့သန်းနဲ့ လမ်းမထက်မှာ မိမိတို့ရဲ့  လိုအင်ဆန္ဒတွေကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ သို့သော် ကျနော်တို့ ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာက ကျည်းဆန်တွေပဲ။ သေနတ်တွေပဲ။ ကျနော်တို့ ပေးဆပ်ခဲ့တာ လူ့အသက်တွေပဲ။ ဒီဟာမှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ တရားမျှတတဲ့ ခုခံစစ်၊ ခုခံတော်လှန်စစ်ဆိုတာက မဖြစ်မနေ ရွေးချယ်ရမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ တော်လှန်ရေးရဲ့  ထောက်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကလဲ ကမ္ဘာပေးမှာ သီအိုရီတွေ ရှိတာပဲ။ တရားမျှတတဲ့စစ်၊ ခုခံစစ်ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာလည်း သီအိုရီသဘောတရား ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့က တရားမျှတတဲ့ ခုခံတော်လှန်စစ်ကို ပြည်သူတွေက မဖြစ်မနေ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကသာ တွန်းပို့တဲ့ တော်လှန်သစ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲ ပြောလိုပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံးတစ်ခု မေးချင်တာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ အခုနပြောသလို အခုဆိုရင် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာဟာ (၈) လ ရှိလာခဲ့ပြီ။ (၈) လ ကျော်လာခဲ့ပြီ။ ဆိုတော့ ဒီ (၈) လကျော်ကြာ ကာလမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့  အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုတေဇာဆန်း ဘယ်လို သုံးသပ်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံတကာ ၁၀-၁၁ နောက်ပိုင်းမှာက နိုင်ငံရေးစပြီးတော့ ဖြေလျှော့မှုတွေ စခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးဖြေလျှော့မှုတွေနဲ့အတူ တစုံတရာ စီးပွားရေး၊ လူမှု့စီးပွားရေး တိုးတက်မှုတွေ များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေ၊ လူနေမှုတွေ အများကြီး ဆယ်စုနှစ်လောက်အတွင်း တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဒါတွေအားလုံးကို ၂၀၂၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုက အားလုံးကို နောက်ပြန်ဆုတ်စေတဲ့။ တနည်းပြောရင် လမ်းကိုချော်ထွက်သွားစေတဲ့ လုပ်ရပ်ကြီးလို့ပဲ ပြောလိုပါတယ်။ ဒီနေ့အခြေအနေမှာ မြန်မာကျပ်ငွေဈေးနှုန်းက အဆမတန် ထိုးကျသွားပြီး ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့  လူမှုစီးပွားရေး အဆင့်တိုင်းမှာ များစွာနိမ့်ကျသွားပြီ. ကျနော်တို့ သိရတာက ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့  ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဆုတ်ယုတ်သွားပြီလို့ သိရတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်အာဏာရှင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့  လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးတွေအားလုံး များစွာဆုတ်ယုတ်သွားပြီ။ အနောက်ကို များစွာဆုတ်သွားပြီလို့ ပြောလိုပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးရဲ့  တစ်ခုတည်းသော တရားခံကလည်း စစ်တပ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပဲ ဖြစ်တယ်။ စစ်အုပ်စုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့ ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲတွေ ရှိပါစေ။ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ကိုတော့ ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကို ချီတက်နေမှာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခသုတ်ခမျိုးစုံရဲ့  တစ်ခုတည်းသော တရားခံသည် သမိုင်းတရားခံကတော့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု၊ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ပြောလိုပါတယ်။
ကိုရန်နိုင် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုတေဇာဆန်း ကျေးဇူးပါပဲ။
တေဇာဆန်း။ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈအတှငျး တိုးတကျပွောငျးလဲလာခဲ့တဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေးဟာ စဈအာဏာသိမျးမှုကွောငျ့ နောကျပွနျဆုတျကုနျတယျ၊ ပွညျသူတှဘေကျက ရှေးခယျြစရာမရှိပဲ ဆကျပွီးတျောလှနျသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ မန်တလေးက နှဦေးတျောလှနျရေး ခေါငျးဆောငျ ဒေါကျတာတဇောဆနျးက ပွောပါတယျ။ ကိုရနျနိုငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ မင်ျဂလာပါ ကိုတဇောဆနျး။ အခုဆိုရငျ စဈတပျက အာဏာသိမျးခဲ့တာ (၈) လ ကြျောလာခဲ့ပွီ။ ဒါပမေဲ့ စဈတပျက ဒီလိုအာဏာသိမျးတဲ့အပျေါ လူထုကလညျး ဆနျ့ကငျြတျောလှနျမှုတှေ၊ လူထုလှုပျရှားမှုတှကေ ဆကျပွီးတော့ ရှိနတေုနျးပဲ။ ပုံစံတှပွေောငျးလာတယျဆိုပမေယျ့ လူထုရဲ့ ဆနျ့ကငျြမှုတှကေ ဆကျပွီးတော့ ရှိနတေယျ။ ဆိုတော့ ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ သိခငျြတာက အခုလကျရှိ စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေး လူထုလှုပျရှားမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ကိုတဇောဆနျးရဲ့ အမွငျကို သိခငျြပါတယျ။
ဖွေ ။ ။ မင်ျဂလာပါ။ ဒီနဆေို့ရငျ အခြိနျကာလအားဖွငျ့ ရှဈလတောငျ ကွာခဲ့ပွီ။ ကနြျောတို့လူထုက တဈနတေ့ဈရကျ တဈနာရီမှ ငွိမျသကျသှားတာမြိုး၊ သှေးအေးသှားတာမြိုး စဈအာဏာရှငျကိုရော၊ အာဏာသိမျးမှုကိုရော လုံးဝလကျမခံဘဲ၊ အာဏာရှငျစနဈအောကျမှာ အသားကသြှားမှာမဟုတျဘူးဆိုတာ -- တျောလှနျရေးကာလ ဖွဈလာကာစ အကောငျးဆုံးသကျသတေညျနပွေီလို့ ပွောလိုပါတယျ။ ကနြျောတို့ တျောလှနျရေးတိုကျပှဲနညျးနာ ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ ကနြျောတို့ မြှျောရညျတဲ့ပနျးတိုငျကို မရောကျမခငျြး၊ ဆကျပွီးတော့ ခြီတကျသှားကွမယျဆိုတာ အငျမတနျသခြောနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
မေး ။ ။ လမျးပျေါထှကျ ဆန်ဒပွနတောတှဟော အရငျလိုမြိုးတော့ အုံနဲ့ကငျြးနဲ့ မဟုတျတော့ဘဲ၊ နညျးသှားတယျဆိုပမေယျ့ ရှိတော့ရှိနတေုနျးပဲ။ မန်တလေးအပါအဝငျ တခြို့မွို့တှမှောဆိုရငျ နတေို့ငျးရှိနတေုနျးပဲ။ တဘကျမှာလဲ စဈကောငျစီက သူတို့ကို ဆနျ့ကငျြတဲ့လူတှကေို ပိုပွီးတော့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ နှိမျနငျးလာတယျ။ စဈကောငျစီဘကျကလဲ သူတို့ကို တတိုငျးပွညျလုံးက ဆနျ့ကငျြနတော မဟုတျဘူး။ တခြို့မွို့တှမှောပဲ ဆနျ့ကငျြနတောဆိုပွီးတော့ ပွောတာတှေ ရှိနတေယျ။ ဆိုတော့ အခုနောကျပိုငျး တျောလှနျရေးအသှငျ ပွောငျးလာတော့ ဆန်ဒပွသပိတျတှကေ အရငျလိုတော့ မဟုတျတော့ဘူးဆိုတော့ ဒီဆန်ဒပွသပိတျတှေ ဆကျရှိနဖေို့ ဘယျလောကျအထိ အရေးကွီးတယျလို့ ဆိုမလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကနြျော အမွဲတမျးပွောပါတယျ။ ဒီနှဦေးတျောလှနျရေးမှာ ဒီနအေ့ခြိနျမှာ တျောလှနျရေးရဲ့ မဏ်ဍိုငျတှေ။ ကနြျောတို့မှာ အဓိကမဏ်ဍိုငျကွီး (၅) ခုကို ကောကျခကျြထားလို့ ရပါတယျ။ ပထမတဈခုကတော့ အခုအခြိနျမှာ အရေးကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ လကျနကျကိုငျ တိုကျပှဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယတဈခုက လမျးမထကျက သပိတျတိုကျပှဲ ဖွဈပါတယျ။ တတိယအနနေဲ့ CDM ရုံးမတကျဘဲ ရုနျးထှကျခဲ့တဲ့ CDM သူရဲကောငျးတှရေဲ့ CDM တိုကျပှဲဖွဈတယျ။ စတုတ်ထအနနေဲ့ကတော့ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာမှာ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရက တရားဝငျအစိုးရ ဖွဈတယျ။ စဈကောငျစီက အကွမျးဖကျအုပျစု ဖွဈတယျဆိုတဲ့ တရားဝငျမှုဆိုငျရာ သံခငျးတမနျခငျး တိုကျပှဲ။ ပဉ်စမ - ငါးခုမွောကျအနနေဲ့ ကနြျောတို့ စဈကောငျစီကို အသိအမှတျမပွဘူး၊ လကျမခံဘူး။ သူနဲ့ အဆကျအစပျ မလုပျဘူးဆိုတဲ့ “ဘူးသပိတျတိုကျပှဲ” ဖွဈတယျ။ ကနြျောတို့က ဒီတျောလှနျရေးရဲ့ ဒေါကျတိုငျကွီး (၅) ခု အားကောငျးနဖေို့လိုတယျ။ ဟနျခကျြညီနဖေို့လိုတယျ၊ သနျမာနဖေို့လိုတယျ။ ဒီမဏ်ဍိုငျ (၅) ခုထဲက တဈခုခု အားနညျးသှားမယျ၊ ယိုငျးနညျ့သှားမယျဆိုရငျ ကနျြတဲ့ဟာတှကေ ဒီအပျေါမှာ အနုတျလက်ခဏာဆောငျသှားမယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ အမွဲတမျးပွောနတော တျောလှနျရေးရဲ့ ဒေါကျတိုငျတှအေားလုံး တျောလှနျရေးနညျးနာတှအေားလုံး အားကောငျးသနျမာနဖေို့ အငျမတနျအရေးကွီးတယျလို့ ပထမဦးဆုံး ပွောလိုပါတယျ။
ဒုတိယတဈခုအနနေဲ့တော့ မှနျပါတယျ။ ကနြျောတို့တှေ လမျးမထကျက သပိတျတိုကျပှဲတှဟော ဖဖေျေါဝါရီ၊ မတျ၊ ဧပွီလတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ လူထုပါဝငျမှုက လြော့ကသြှားတယျ။ ဒါကလဲ အဆနျးတကယျြလဲ မဟုတျဘူး။ လူထုကို အပွဈတငျစရာလဲ အကွောငျးမရှိဘူး။ စဉျးစားကွညျ့ရအောငျ - လကျနကျဆိုလို့ အပျတိုတဈခြောငျးတောငျ မရှိခဲ့ဘူး။ ဆိုငျးဘုတျလေးတှကေိုငျ၊ လျောစပီကာလေးတှကေိုငျ လမျးမထကျမှာ မိမိတို့အရေး ဆန်ဒတှေ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနခေဲ့ကွတယျ။ ရဟနျးရှငျလူထုကို သနေတျအစဈ၊ ကညျြးအစဈနဲ့ ရကျရကျစဈစကျ ပဈသတျခဲ့တာ။ အခြိနျတိုငျး၊ နတေိုငျးလိုလို ပဈခံခဲ့ရတယျ။ ဖွိုခှဲခံခဲ့ရတယျ။ ဒီလိုအခွအေနမှောတောငျ ရှဈလကွာခဲ့ပမေယျ့ သပိတျတိုကျပှဲတှေ ရှိနတေယျဆိုတာ အငျမတနျဂုဏျယူစရာ ကောငျးနပေါပွီ။ အငျမတနျအသိအမှတျပွုဖို့ ကောငျးပွီ။ ကနြျောထငျတယျ ဒီလောကျကွာ သပိတျတိုကျပှဲက ကမ်ဘာမှာတောငျ အရှညျကွာဆုံး သပိတျတိုကျပှဲ။ ဒီနအေ့ခြိနျအထိ ကနြျောတို့က သပိတျတှေ ရှိနသေေးတယျ။ ပြောကျကြားသပိတျတှေ ရှိနသေေးတယျ တနိုငျငံလုံးမှာ မွို့ကွီးတှနေဲ့ ကြေးလကျတှမှော။ အဲဒီတော့ ပွောခငျြတာက လူထုပါဝငျမှု သပိတျတှေ အားနညျးသှားတာ အကွမျးဖကျစဈကောငျစီ၊ စဈတပျရဲ့ ရကျစကျယုတျမာမှု ပဈခတျမှုတှကွေောငျ့သာ ဖွဈတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
မေး ။ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ လပိုငျးလောကျက ကနြျော စဈကောငျစီအဖှဲ့ဝငျတဈယောကျကို အငျတာဗြူးတဲ့အခါမှာတော့ သူက ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ငွိမျးခမျြးစှာဆန်ဒပွလို့ ရတယျလို့ ပွောတယျ။ ဆန်ဒပွတဲ့ သူတှအေနနေဲ့ အကွမျးဖကျတာတှေ၊ ပွညျသူပိုငျပစ်စညျးတှကေို ဖကျြဆီးတာတှေ မလုပျဘူးဆိုရငျ စဈကောငျစီဘကျကလညျး ဒီလိုမြိုး အကွမျးဖကျအငျအားသုံး နှိမျနငျးစရာ မလိုဘူးလို့ ပွောထားတာ ရှိပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီအပျေါ ကိုတဇောဆနျးအနနေဲ့ ဘယျလိုပွောခငျြလဲ။
ဖွေ ။ ။ အငျမတနျ မကျြနှာပွောငျတိုကျတဲ့ ဟာသစကားလို့ပဲ ပွောလိုပါတယျ။ တခြို့ မန်တလေးမှာဆိုရငျ လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျးကပဲ သံဃာသပိတျ အဖွိုခှငျးခံရပါတယျ။ သံဃာတျော တကယျ့ဘုရားသားတျော လယျတီဆရာတျောတှေ ဦးဆောငျတဲ့ သံဃာတှကေို ရကျရကျစကျစကျ တနျးပွီးတော့ အရပျဝတျတှနေဲ့ စဈယူနီဖောငျး၊ ရဲယူနီဖောငျးမပါဘူး အရပျဝတျတှနေဲ့ သနေတျစဈတှနေဲ့ တနျးပဈတယျ။ ကားနဲ့ဝငျတိုကျတယျ။ ဆိုငျကယျနဲ့ ဝငျတိုကျတယျ။ ဒါက နမူနာတဈခုပဲကို ပွောတာ။ အဲဒါမြိုးတှကေ မကွာခဏ ဖွဈနတေယျ။ ကနြျောတို့ အခုနပွောသလို လကျနကျနဲ့ တူတာဆိုလို့ အပျတိုတဈခြောငျးတောငျ မပါဘူး။ ဆိုငျးဘုတျတှေ၊ ကွှေးကွျောသံလေးတှနေဲ့ ခြီတကျနတေဲ့ သပိတျတိုကျပှဲတှေ။ အကွမျးဖကျဖို့ နနေသောသာ ကနြျောတို့က မိမိတို့ရဲ့ လိုလားခကျြတှကေို ငွိမျးခမျြးစှာ တောငျးဆိုနတေဲ့ သပိတျပွညျသူတှကေို စဈကောငျစီက ရကျရကျစကျစကျ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ အခြိနျနဲ့အမြှ ဖွိုခှဲနတေယျ။ သတျဖွတျနတေယျလို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ။ တကယျ အခုနပွောခဲ့တဲ့ စဈကောငျစီအဖှဲ့ဝငျအနနေဲ့ မယုံဘူးဆိုရငျ သူကိုယျတိုငျ အသှငျယူပွီးတော့ ဒီနေ့ ရနျကုနျမှာဖွဈတယျ၊ မန်တလေးမှာဖွဈတဲ့ သပိတျစဈကွောငျးတဈခုခုမှာ လိုကျကွညျ့ပါလို့။ ဘယျလိုကွုံရမလဲဆိုတာကို သူကိုယျတိုငျဖွဈစေ၊ သူ့မိသားစုဝငျတှကေို ဖွဈစေ လမျးမထကျကိုတကျပွီးတော့ ကွညျ့ရှုကွညျ့ပါလို့ပဲ ပွောလိုပါတယျ။ စဈကောငျစီက စညျးမဉျြးစညျးကမျး ဘယျကငျြ့ဝတျကိုမှ မလိုကျနာဘဲနဲ့ လမျးမထကျက သပိတျတှကေို ရကျရကျစကျစကျ နှိပျစကျနတေယျ၊ ဖွိုခှငျးနတေယျ။ ပဈခတျနတေယျဆိုတာကို သကျသသောကာရတှေ၊ အထောကျအထားတှေ၊ မှတျတမျးမှတျရာတှေ အခိုငျအမာရှိပါတယျလို့လညျး ပွောလိုပါတယျ။ သို့သျော ကနြျောသခြောတာကတော့ ကနြျောတို့ ပွညျသူတှအေထဲကတော့ ဘယျလောကျပဲ အဖမျးအဆီးခံရပါစေ၊ စဈကောငျစီ ဘယျလောကျပဲ နှိပျစကျပါစေ။ ကနြျောတို့ရဲ့ တိုကျပှဲနညျးနားတှအေားလုံးကို လကျတှနျ့သှားမှာ မဟုတျဘူး။ နောကျဆုတျမသှားဘူး။ သှေးမအေးသှားဘူး။ သပိတျတိုကျပှဲက အရှိနျဟုနျကောငျးကောငျးနဲ့ ဆကျရှိနမှော သခြောတယျလို့ ပွောလိုပါတယျ။
အသံတိတျသှားမှာ မဟုတျဘူး။ အလံလိပျသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။
မေး ။ ။ ဒီလိုမြိုး စဈကောငျစီဘကျက အကွမျးဖကျ နှိမျနငျးတာတှနေဲ့ တဆကျတညျး နောကျတဈခု မေးခငျြတာက အခုနောကျပိုငျးဆိုရငျ စဈကောငျစီဘကျက တပျဖှဲ့ဝငျတှကေ လူတှကေို ဖမျးတယျ။ ပွီးရငျ နောကျနကေ့ရြငျ အလောငျးလာထုတျပါဆိုပွီး ပွောတာတှေ ရှိတယျ။ ဥပမာ တဈခုအနနေဲ့ဆိုရငျ မန်တလေးက မွို့မတီးဝိုငျးက ကိုဖကျတီးဆိုလဲ ဖမျးသှားပွီးတော့ သူတို့လကျထကျမှာပဲ သသှေားတယျ။ နောကျ ဒါမြိုးဖွဈတာတှကေ တျောတျောမြားမြားလညျး ရှိတယျ။ ဒီအပျေါမှာ ကိုတဇောဆနျးအနနေဲ့ ဘယျလိုမှတျခကျြပေးလိုလဲ။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျပါတယျ။ မန်တလေးမှာဆိုရငျတောငျ ဒီနဖေ့မျးသှားတယျ။ နောကျတဈရကျနှဈရကျအတှငျး အလောငျးလာယူပါဆိုပွီး ထုတျပမေယျ့ အလောငျးမမွငျရဘူး။ ဥပမာ ဦးဖကျတီးဆိုရငျ ကနြျောတို့ အလောငျးတောငျ မမွငျခဲ့ရပါဘူး။ ဒီလိုမြိုးကိစ်စတှကေ မန်တလေးအပါအဝငျ တနိုငျငံလုံးမှာ ဖွဈနတေယျ။ မနကျခငျးဖမျးသှားတယျ။ ညနကေတြော့ သသှေားပွီ။ ဒီနညေ့ ဖမျးသှားရငျ နောကျနမေ့နကျမှာ ဆုံးသှားတယျဆိုတာတှကေ အလောငျးတောငျ တှခှေ့ငျ့မရလိုကျဘူး။ ဒါတှသေညျ ဘယျတော့မှ ပြောကျကှယျသှားမှာ မဟုတျတဲ့၊ ဘယျတော့မှ ပွီပြောကျသှားမှာ မဟုတျတဲ့ သငျပုနျးခလြေို့ မရတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှေ ဖွဈတယျ။ စဈရာဇဝတျမှုတှေ ဖွဈတယျ။ လူသားမြိုးနှယျ လူ့အခှငျ့အရေးကို အငျမတနျမှ ခြိုးဖောကျနတေဲ့ ရာဇဝတျမှုတှေ ဖွဈတယျလို့ ပွောလို့တယျ။ စဈကောငျစီသညျ ရာဇဝတျမှုမြိုးစုံ ကြူးလှနျနတေဲ့ အကွမျးဖကျအုပျစု ဖွဈတယျဆိုတာကိုလညျး သူ့ရဲ့လုပျရပျတှကေ အငျမတနျထငျရှားစှာ သကျသပွေနတေယျလို့ပဲ ပွောလိုပါတယျ။
မေး ။ ။ အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ တနိုငျငံလုံးလိုလိုမှာ လူထုက ခုခံစဈတှကေို လုပျလာကွတယျဆိုတော့ နရောတျောတျောမြားမြားမှာ လူထုနဲ့ ထိပျတိုကျတှတေ့ာတှေ ရှိလာတယျ။ စဈကောငျစီအနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး လူထုနဲ့ ထိပျတိုကျ နရောတိုငျးလိုလိုမှာ ထိပျတိုကျတှပွေီ့းတော့ လူထုရဲ့ ခုခံစဈတှနေဲ့ တှလေ့ာနတေဲ့ အခွအေနပေျေါမှာ ကိုတဇောဆနျးအနနေဲ့ ဘယျလိုမွငျမိသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ဒါကတော့ ကနြျောတို့ အငျမတနျလေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာကွီး ဗနျမျောတငျအောငျ ရေးခဲ့သလိုပေါ့ - ကနြျောတို့က ဓါးမိုးပွီးတော့ အုပျခြုပျနတေဲ့ အာဏာရှငျကို ဓါးကိုငျပွီးတော့ အနျတုပွီးတော့ ပွနျလညျယှဉျပွိုငျဖို့က ကနြျောတို့ရဲ့ သမိုငျးပေးတာဝနျပဲ။ ကနြျောတို့ ဖဖေျေါဝါရီ၊ မတျ၊ ဧပွီလတှမှော တောကျလြှောကျငွိမျးခမျြးစှာပဲ လူဦးရေးသိနျးနဲ့သနျးနဲ့ လမျးမထကျမှာ မိမိတို့ရဲ့ လိုအငျဆန်ဒတှကေို တောငျးဆိုခဲ့တယျ။ သို့သျော ကနြျောတို့ ပွနျလညျရရှိခဲ့တာက ကညျြးဆနျတှပေဲ။ သနေတျတှပေဲ။ ကနြျောတို့ ပေးဆပျခဲ့တာ လူ့အသကျတှပေဲ။ ဒီဟာမှာ ကနြျောတို့အနနေဲ့ တရားမြှတတဲ့ ခုခံစဈ၊ ခုခံတျောလှနျစဈဆိုတာက မဖွဈမနေ ရှေးခယျြရမယျ့ နညျးလမျးတဈခု ဖွဈလာတယျ။ တျောလှနျရေးရဲ့ ထောကျတိုငျတဈခု ဖွဈလာတယျ။ ဒါကလဲ ကမ်ဘာပေးမှာ သီအိုရီတှေ ရှိတာပဲ။ တရားမြှတတဲ့စဈ၊ ခုခံစဈဆိုတာ ကမ်ဘာမှာလညျး သီအိုရီသဘောတရား ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနဒေီ့အခြိနျမှာ ကနြျောတို့က တရားမြှတတဲ့ ခုခံတျောလှနျစဈကို ပွညျသူတှကေ မဖွဈမနေ အခွအေနအေရပျရပျကသာ တှနျးပို့တဲ့ တျောလှနျသဈကို ရှေးခယျြခဲ့ပွီး ဆောငျရှကျနတေယျလို့ပဲ ပွောလိုပါတယျ။
မေး ။ ။ နောကျဆုံးတဈခု မေးခငျြတာ ရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့ အခုနပွောသလို အခုဆိုရငျ စဈတပျအာဏာသိမျးတာဟာ (၈) လ ရှိလာခဲ့ပွီ။ (၈) လ ကြျောလာခဲ့ပွီ။ ဆိုတော့ ဒီ (၈) လကြျောကွာ ကာလမှာ တိုငျးပွညျရဲ့ အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ကိုတဇောဆနျး ဘယျလို သုံးသပျပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါကတော့ ကနြျောတို့နိုငျငံတကာ ၁၀-၁၁ နောကျပိုငျးမှာက နိုငျငံရေးစပွီးတော့ ဖွလြှေော့မှုတှေ စခဲ့တယျ။ နိုငျငံရေးဖွလြှေော့မှုတှနေဲ့အတူ တစုံတရာ စီးပှားရေး၊ လူမှု့စီးပှားရေး တိုးတကျမှုတှေ မြားစှာရှိခဲ့ပါတယျ။ စီးပှားရေးဖွဈထှနျးတိုးတကျမှုတှေ၊ လူနမှေုတှေ အမြားကွီး ဆယျစုနှဈလောကျအတှငျး တိုးတကျခဲ့ပါတယျ။ သို့သျော ဒါတှအေားလုံးကို ၂၀၂၁ ဖဖေျေါဝါရီလ (၁) ရကျနေ့ စဈအာဏာသိမျးမှုက အားလုံးကို နောကျပွနျဆုတျစတေဲ့။ တနညျးပွောရငျ လမျးကိုခြျောထှကျသှားစတေဲ့ လုပျရပျကွီးလို့ပဲ ပွောလိုပါတယျ။ ဒီနအေ့ခွအေနမှော မွနျမာကပျြငှဈေေးနှုနျးက အဆမတနျ ထိုးကသြှားပွီး ကနြျောတို့နိုငျငံရဲ့ လူမှုစီးပှားရေး အဆငျ့တိုငျးမှာ မြားစှာနိမျ့ကသြှားပွီ. ကနြျောတို့ သိရတာက ကမ်ဘာ့ဘဏျရဲ့ ထုတျပွနျခကျြမှာ ၁၁ ရာခိုငျနှုနျးအထိ ဆုတျယုတျသှားပွီလို့ သိရတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ စဈအာဏာရှငျ စဈအာဏာသိမျးမှုကွောငျ့ ကနြျောတို့နိုငျငံရဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေးတှအေားလုံး မြားစှာဆုတျယုတျသှားပွီ။ အနောကျကို မြားစှာဆုတျသှားပွီလို့ ပွောလိုပါတယျ။ ဒါတှအေားလုံးရဲ့ တဈခုတညျးသော တရားခံကလညျး စဈတပျနဲ့ စဈအာဏာရှငျစနဈပဲ ဖွဈတယျ။ စဈအုပျစုပဲ ဖွဈတယျလို့ ပွောလိုပါတယျ။ ကနြျောတို့ ပွညျသူတှအေနနေဲ့တော့ ဘယျလောကျပဲ အခကျအခဲတှေ ရှိပါစေ။ ကနြျောတို့ မြှျောလငျ့ခကျြပနျးတိုငျကို ရောကျဖို့ကိုတော့ ဒီတျောလှနျရေးကွီးကို ခြီတကျနမှောဖွဈတယျ။ လကျရှိတိုငျးပွညျမှာ ဖွဈနတေဲ့ ဒုက်ခသုတျခမြိုးစုံရဲ့ တဈခုတညျးသော တရားခံသညျ သမိုငျးတရားခံကတော့ စဈအာဏာသိမျးမှု၊ စဈအာဏာရှငျအုပျစုပဲ ဖွဈတယျလို့ပဲ ပွောလိုပါတယျ။
ကိုရနျနိုငျ ။ ။ ဟုတျကဲ့ပါ ကိုတဇောဆနျး ကြေးဇူးပါပဲ။
တဇောဆနျး။ ။ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။
သုံးပွင့်ဆိုင် အောကပ်စ်အဖွဲ့နဲ့ တရုတ်